Enweghi ike ịgbasa nchekwa. Enweghi ike imeghe ntọala nchekwa. Emehie nwere ike achọpụtara na faịlụ.
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Emehie nwere ike achọpụtara na faịlụ
Zuru ezu Ozi banyere "Njehie nwere ike achọpụtara na Njikwa" Error
Mgbe ị na-eji Microsoft Outlook imeghe ma ọ bụ mekọrịta otu folda na-anọghị n'ịntanetị (.ost) faịlụ, ị na-ahụ ndị na-esonụ njehie ozi:
Enweghi ike ịgbasa folda ahụ. Enweghi ike imeghe ntọala folda. Enwere ike ịchọpụta njehie na faịlụ xxxx.ost. Kwụsị ngwa niile ejiri rụọ ọrụ, ma jiri Ngwaọrụ Mmezi Igbe.
mgbe gị OST faịlụ na-emebi ma ọ bụ mebiri emebi, na-enweghị ike hazie site Microsoft Outlook, ọ ga-akọ na nke a njehie.
Iji dozie njehie a ma gbochie ọnwụ data, biko mee ndị a:
chọta OST faịlụ na-akpata njehie. Dabere na ozi dị na njehie ozi, ị nwere ike mfe ịchọta faịlụ ahụ. I nwekwara ike iji search rụọ ọrụ na Windows iji chọọ maka OST faịlụ.
Naghachi data na-anọghị n'ịntanetị na OST faịlụ. The Exchange OST faịlụ ahụ nwere data na-anọghị n'ịntanetị, gụnyere ozi ozi na ihe ndị ọzọ niile, na igbe ozi Exchange gị, nke dị gị oke mkpa. Iji naghachi na-anapụta ndị a data, ị ga- ojiji DataNumen Exchange Recovery i scanomi ihe OST faịlụ, weghachite data dị na ya, wee chekwaa ha na faịlụ Outlook PST nke mere na ị nwere ike ịnweta niile ozi na ihe na Outlook mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
Idozi njehie ahụ. Gbaa mbọ hụ na ntọala akaụntụ email dị na Outlook ziri ezi, na Outlook nwere ike ijikọ na ihe nkesa Exchange gị n'ụzọ ziri ezi. Mgbe restart Outlook na zipu / nata ozi ịntanetị gị na igbe ozi Exchange Exchange kwekọrọ, nke ga-eme ka Outlook mepụta ọhụụ OST Ọ bụrụ na usoro a anaghị arụ ọrụ, profaịlụ ozi ugbu a ezighi ezi, ị ga-ehichapụ ya ma mepụta nke ọhụrụ, dị ka ndị a:
Mbubata data natara na nzọụkwụ 3. Mgbe gị OST nsogbu nsogbu faili na-edozi, debe nke ọhụrụ OST faịlụ maka igbe akwụkwọ ozi Exchange mepere, wee mepee faịlụ PST mepụtara na nzọụkwụ 3 na Outlook. Dị ka ọ nwere ihe niile natara data gị mbụ OST faịlụ, ị nwere ike i copyomi chọrọ ihe ọhụrụ gị OST faịlụ nhọrọ.